श्रीमानले बिदेशबाट पठाएको पैसाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै ! श्रीमतीले नेपालमै तरकारी खेति गरेर यति पैसा कमाउने रहेछिन « Light Nepal
श्रीमानले बिदेशबाट पठाएको पैसाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै ! श्रीमतीले नेपालमै तरकारी खेति गरेर यति पैसा कमाउने रहेछिन
Published On : 17 April, 2018 3:16 am
खोटाङ – खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेकी दुर्गा बस्नेतका श्रीमान कतारमा छन्। श्रीमानले कतारमा मासिक ५० हजार आम्दानी गरिरहदा दुर्गाले पनि तरकारी खेतीबाट घरैमा मासिक २०–२५ हजार आम्दानी गर्ने गरेकी छन्। नागरिक न्युजमा खबर छ ।